Nkwụnye na Parts
Ọkụ Gas Manual
Piezo Ing Gas Gas
Principlekpụrụ ọrụ nke flamethrower
Site n'ịgbanwe nrụgide ahụ na ịgbanwe ntụgharị ahụ, a na-achụpụ gas ahụ site na ọnụ egbe ahụ ma gbanye ya iji mepụta ọkụ ọkụ dị elu maka ikpo ọkụ na ịgbado ọkụ. N'ihe banyere usoro, e nwere ụdị ọkụ abụọ na-ejide n'aka, otu bụ igbe ikuku nke nwere nkwụ na mgbaka elu ...GỤKWUO »
Usoro ọrụ nchekwa maka ikuku gas
1. Nnyocha: jikọọ akụkụ niile nke egbe ahụ, mee ka mpempe gas ahụ sie ike, (ma ọ bụ jiri eriri ígwè mee ka ọ sie ike), jikọọ njikọ njikọ gas, mechie ihe mgba ọkụ ahụ, gbanye valvụ nke gas gas, ma lelee ma ebe ahụ bụ ikuku ikuku n'akụkụ nke ọ bụla. 2. Mgbanye: ntakịrị relea ...GỤKWUO »
Kpụrụ nke flamethrower
Igwe ọkụ ahụ bụ ụdị arịa ọhụrụ n'èzí, nke bụ arịa arịa ubi. A na-akpọ ya "Torch" na mba ọzọ. Ọ bụ ụdị ihe eji eji ọkụ kpo oku sitere na gas butane dị. Ngwongwo ihe eji eme ihe n'ubi na-ezo aka n'isi oku na isi ...GỤKWUO »
Post oge: Ọgọstụ-21-2020
N'ụbọchị mbụ nke 2020, ndị ọrụ Kalilong 100 na-ezukọ iri nri abalị .N'oge nri abalị, anyị na-eme atụmatụ egwuregwu, ịbụ abụ, ịgba egwu wdg. Onye isi njikwa Mr Chen na-ekwu okwu, na-aja ndị ọrụ ibe ha na-arụsi ọrụ ike mma, ma na-enye ha ego iji gaa n'ihu na mbọ ha na 2020. GỤKWUO »
2020, n'ezie afọ pụrụ iche
Post oge: Ọgọstụ-19-2020
2020 bụ afọ pụrụ iche, mmalite siri ike ịmalite .coVID-19 ntiwapụ, amachibidoro mpaghara Hubei ọnwa atọ, ọkara nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ Hubei enweghị ike ịlaghachi ọrụ. Ole na ole ndị ọrụ na-alọghachi na Machị 1 ịmalite ịrụ ọrụ n'okpuru nnukwu nrụgide. Enwere ọtụtụ iwu enyere site na custo ...GỤKWUO »
Mgbe anyị nwetasịrị akwụkwọ CE site n'aka Intertek na TUV, anyị na-enweta akụkọ nyocha ọhụụ gbasara EN521. GỤKWUO »
AKW SAKWỌ AKW SAKWỌ NA-ADFGH ONL AKW ONLKWỌ NA-AKW HASSO, EBUGH E Ọgwụgwụ
Kedu ihe dị mma pridcution: Nkwalite nchebe bụ ịdị n'otu nke nchekwa na prodcuton, na ebumnuche ya bụ ịkwalite mmepụta n'enweghị nsogbu, ma gbakwunye ya ga-adị mma. Rụ ezigbo ọrụ na nchekwa ma melite ọnọdụ ọrụ; ibelata ọghọm nke ihe onwunwe nwere ike ime ka arụmọrụ nke ụlọ ọrụ dịkwuo elu, ọ ga - ewepụtakwa ...GỤKWUO »
Anyị ga-aga China Ngosipụta Ngosipụta na Shanghia site na Ọkt 10th ruo 13 .Welcome to our booth! GỤKWUO »
Ezumike ezumike n'ihi Ubochi MBA na etiti-ememme
Dika ndokwa ezumike nke mba, jikọtara ya na ọnọdụ nke ụlọ ọrụ anyị, usoro ezumike bụ ndị a: A ga-enwe ụbọchị atọ site na Ọktoba 1, 2020 ruo Ọkt 3nd. Gaa rụọ ọrụ na Ọkt 4. Na-achọ gị ezigbo ezumike. GỤKWUO »
Companylọ ọrụ: Yuhuan Kalilong Metal Products Co., Ltd.
Adreesị: Obodo Wujia, Obodo Chumen, Yuhuan City, Zhejiang Province, China.
Site n'ịgbanwe nrụgide ahụ na ịgbanwe ntụgharị ahụ, a na-achụpụ gas ahụ site na egbe egbe wee gbanye ya iji mepụta ọkụ ọkụ dị elu maka ikpo ọkụ na ...
1. Nnyocha: jikọọ n'akụkụ nile nke ịgba egbe, ikesiike gas anwụrụ mwekota, (ma ọ bụ ikesiike na ígwè waya), jikọọ liquefied gas njikọ, mechie spray egbe sw ...
Igwe ọkụ ahụ bụ ụdị arịa ọhụrụ n'èzí, nke bụ arịa arịa ubi. A na-akpọ ya "Torch" na mba ọzọ. Ọ bụ ụdị ...
N'ụbọchị mbụ nke 2020, ndị ọrụ Kalilong 100 na-ezukọ iri nri abalị .N'oge nri abalị, anyị na-eme atụmatụ egwuregwu, ịbụ abụ, ịgba egwu wdg. Onye isi njikwa Mr Chen na-eme ngwa ngwa ...
2020 bụ afọ pụrụ iche, mmalite mmalite siri ike .coVID-19, amachibidoro mpaghara Hubei ọnwa atọ, ọkara nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ Hubei nwere ike ...
Mgbe anyị nwetasịrị akwụkwọ CE site n'aka Intertek na TUV, anyị na-enweta akụkọ nyocha ọhụụ gbasara EN521.
Kedu ihe dị mma pridcution: Nkwalite nchebe bụ ịdị n'otu nke nchekwa na prodcuton, na ebumnuche ya bụ ịkwalite mmepụta n'enweghị nsogbu, ma gbakwunye ya ga-adị mma. Na-eme ezigbo ...
Anyị ga-aga China Ngosipụta Ngosipụta na Shanghia site na Ọkt 10th ruo 13 .Welcome to our booth!